एक हप्ता नबित्दै फेरि अर्को बलात्कार ! किशाेरीलार्इ ज्युँदै जलाइयाे, गृहमन्त्रीकै क्षेत्रमा महिला असुरक्षित::kamananews
एक हप्ता नबित्दै फेरि अर्को बलात्कार ! किशाेरीलार्इ ज्युँदै जलाइयाे, गृहमन्त्रीकै क्षेत्रमा महिला असुरक्षित
एजेन्सी : भारतकाे मध्यप्रदशेमा एक किशाेरीकाे बलात्कारपछि ज्यूँदै जलाएर हत्या गरिएकाे छ । एकै हप्तामा याे भारतमा घटेकाे तेस्राे दर्दनाक घटना हाे ।
घटना मध्यप्रदेशकाे सागर जिल्लामा भएकाे हाे । एक १६ वर्षीया युवतीलार्इ बलात्कार गरेपछि उनको घरमै तेल खन्याएर शरीरमा अागाे लगाइएको थियो। त्यहाँका प्रहरीले बताएअनुसार, पीडितले बलात्का रकाे पाेल खाेल्ने डरले उनलार्इ ज्यूँदै जलाएर हत्या गरिएकाे हाे । आक्रमणकारीले बलात्कारकाे घटना बाहिर अाउने डरले किशाेरीकाे हत्या गरेको खुलेकाे छ ।
सागर जिल्लाकाे प्रहरी स्राेतले भनेकाे छ, “केटीको परिवार घटनाको समयमा घरबाहिर गएकाे थियाे।” घटनाका अभियुक्तलार्इ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रदेश गृहमन्त्री भोपालन्द्र सिंहको निर्वाचन क्षेत्रमै साे घटना भएकाे हो। यस क्षेत्रमा मात्रै यसरी बलात्कारपछि हत्या गरिएकाे पछिल्लो छ महिनामा याे चौथो घटना रहेकाे बताइएकाे छ ।
यस्तै दुर्इवटा बलात्कारपछि हत्याका घटना यस हप्ता झारखण्डमा पनि भएक छन्। त्यहाँ दुर्इ किशाेरीलार्इ ज्यूँदै जलाइएकाेमा एक जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने अर्की एक गम्भीर घाइते भएकाे जनाइएकाे छ। मृत्यु भएकी किशाेरी अाफन्तबाटै बलात्कारकाे शिकार भएकी थिइन् भने अर्की घाइते चाहिँ १७ वर्षकाे उमेरमा विवाह गर्न नमान्दा हिंसाकाे शिकार भएकी थिइन् ।
महिलाहरू असुरक्षित भएकाे र बलात्कारका घटना बढेकाे भन्दै भारतमा पुन: अान्दाेलन र प्रदर्शन चर्किएकाे छ । गत जनवरीमा मात्रै जम्मू-कश्मीरमा एक आठ वर्षकी बच्चीलार्इ बलात्कारपछि हत्या गरिएकाे थियाे, जसका कारण देशैभरि अाक्राेश र प्रदर्शन चर्किएकाे थियाे ।